blog ! | Movie Guide !
Home! Action Animation Adventure Murder Thriller Comedy Drama Mystery Romance Sci-Fiction blog ! ရေးခဲ့သမျှ … Home \_ blog ! blog !
၈၈ ကြိမ်မြောက် အော်စကာဆုပေးပွဲ (၂၀၁၆)
THIHA | blog !
The Revenant ဇာတ်ကားမှ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်ဆုရရှိသွားသူ Leonardo DiCaprio The Danish Girl မှ အကောင်းဆုံးဇာတ်ပို့ အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆု ရရှိသွားသူ Alicia Vikande အကောင်းဆုံး နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆု ရရှိသွားသော ဟန်ဂေရီဇာတ်ကား Son of Saul ဒါရိုက်တာ Laszlo Nemes အကောင်းဆုံးအထူးပြုလုပ်ချက်ရုပ်ရှင်ဆု (Best Animated Feature) ရရှိသွားသော Inside Out ကာတွန်းကား ဒါရိုက်တာ Director Pete Docter and Jonas Rivera အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဆု ရရှိသွားသော A girl in the River : The Price of Forgiveness ဇာတ်ကားမှ Filmmaker […]	Read more “ပြည်ထောင်စုမယ် မင်းသမီးခင်သန်းနု”
ခင်သန်းနုသည် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်တွင် အကယ်ဒမီရ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ခင်သန်းနုသည် ပျဉ်းမနားမြို့၌ ဦးအောင်သန်းနှင့် ဒေါ်နုတို့မှ မွေးဖွားခဲ့သည့် သားသမီး လေးဦးအနက် အကြီးဆုံးသမီးဖြစ်သည်။ ခင်သန်းနုသည် ဘယ်သန် ဖြစ်သည်။ မိခင်ဖြစ်သူ၏ တိုက်တွန်းမှုကြောင့် အားကစား လိုက်စားခဲ့ပြီး မန်းတိုင်းမယ်၊ ဥတ္တရ တိုင်းမယ်တို့ကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ကာ ၁၉၆၁-ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုမယ်ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၆၁-ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် မယ်ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး မေလတွင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ရိုက်ကူးဖို့ ကမ်းလှမ်းခြင်း ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာ မောင်သင် ရိုက်ကူးသည့် တင့်လှပေဟန် ဇာတ်ကားတွင် စာရေးဆရာ ဆရာဝန် သရုပ်ဆောင် မောင်သင်၊ မေသစ် တို့နှင့်အတူ တွဲဖက်ပြီး ပါဝင်သရုပ် ဆောင်ခဲ့သည်။ "၀င်းဦးနှင့် ညွန့်ဝင်းနှင့်" တင့်လှပေဟန် ရိုက်ကူး နေဆဲမှာပင် […]	Read more “အကယ်ဒမီများနှင့် ဝဏ္ဏကျော်ထင် ဖိုးပါကြီး”
"အကယ်ဒမီများနှင့် ဝဏ္ဏကျော်ထင် ဖိုးပါကြီး" "ဒုက္ခများနှင့် ငယ်ဘဝ" ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဖိုးပါကြီး၏ အမည်ရင်းမှာ မောင်ညွှန့်လှိုင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၁၈ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ရက်၊ အင်္ဂါနေ့တွင် ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်မြို့၌ အဖယစ်မျိုးအမှုထမ်း ဦးစံဖေ၊ အမိ ဒေါ်လှတို့မှ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မွေးချင်းသုံးဦးအနက် အလတ်ဖြစ်ပြီး ညီမငယ်မှာ အမာစိန်ဖြစ်သည်။ အစ်ကိုဖြစ်သူမှာ ငယ်စဉ်ကပင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ ဟင်္သာတမြို့တွင် အနေကြာကြီးပြင်းခဲ့သည့်အတွက် ဖိုးပါကြီးအား ဟင်္သာတဇာတိဖွားဟု ထင်မှတ်နေကြသည်။ အသက် (၆)နှစ် အရွယ်တွင် မိဘနှစ်ပါး၏ အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲမှုကြောင့် လူမမည်ဘဝအရွယ်တွင် အရွယ်နှင့်မမျှအောင် ဒုက္ခမျိုးစုံ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ အပစ်ပယ်ခံဘဝတွင် ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေသည့် ဖိုးပါကြီးကို ပုသိမ်မြို့ ‘နိဂြောဓါ’ ကျောင်းတိုက် တလိုင်းကျောင်းဆရာတော် ဦးသုမနက ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ခဲ့သည့်အတွက် ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် လူလားမြောက်ခဲ့ရ ပေသည်။ "ရန်ကုန်ရောက်တဲ့ […]	Read more သက်ရှိပန်းပုရုပ်လေး ကင်မာဂျောင်း
Hollinaz | blog !
အသက် ၃၁ နှစ် ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချော ကင်မာဂျောင်းကို ၁၉၈၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့မှာ ဖွားမြင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်သလို အဆိုတော်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ သရုပ်ဆောင်လောကကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပေမယ့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ 200 Pounds Beauty ဇာတ်ကားအပြီးမှာ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ခံခဲ့ရပါတယ်။ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ သက်ရှိ ပန်းပုရုပ်တုလေးလို့ လူသိများတဲ့ ကင်မာဂျောင်းဟာ 200 Pounds Beauty ဇာတ်ကားထဲကအတိုင်း ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေ ပြုလုပ်ထားသူလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားတာက မျက်နှာကိုပဲ ပြုလုပ်ထားတာပါလို့ သိရပါတယ်။ ပထမဆုံး ခွဲစိတ်မှုကတော့ သူ့ရဲ့ နှာခေါင်းကို […]	Read more ၂၀၁၃ အော်စကာ အကြို
မတ်လ ၂ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပတော့မယ့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် အော်စကာ ဆုပေးပွဲကြီးက တဖြည်းဖြည်း နီးကပ်လာပါပြီ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းမှာလည်း ဟောလိဝုဒ်ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဇာတ်ကားကောင်းများစွာနဲ့ ပြည့်နှက်နေတာမို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် အော်စကာဆုကို ဘယ်သူတွေ ရပြီး ဘယ်သူတွေ လွဲချော်ကြမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ၂၀၁၃ အတွက် အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဆုကို Tom Hanks ရဲ့ Captain Phillips ၊ Leonardo ရဲ့ The Wolf of Wall Street ၊ Sandra Bullock ရဲ့ Gravity ၊ Joaquin Phoenix ရဲ့ Her ၊ Christian Bale […]	Read more Movie Guide ! - Close